मुरे गेल-म्यान-- भाषाको पूर्वजको बारेमा - English-Video.net
अँ, म भौतिकविज्ञान बाहेक अरु कुराहरूमा पनि संलग्न छु।
वास्तवमा, अहिले चाहिँ धेरैजसो अरु कुराहरूमा।
एउटा कुरा चाहिँ मानव भाषाहरूबिचको टाढाको सम्बन्ध।
र अमेरिका र पश्चिमी यूरोपका व्यावसायिक, ऐतिहासिक
भाषाविज्ञहरू प्राय:जसो कुनै पुरानो सम्बन्धबाट
टाढै बस्न खोज्छन; ठूला समूहहरू,
त्यस्ता समूहहरू जो धेरै समय अगाडि जान्छन,
परिचित परिवार भन्दा अगाडि।
ऊनीहरू त्यो मन पराउँदैनन; ऊनीहरू सोच्छन यो सनक हो। मलाई लाग्दैन कि यो सनक हो।
र केहि प्रतिभाशाली भाषाविदहरू छन, धेरैजसो रसियनहरू,
जो सान्टा-फे संस्थान र मस्कोमा यसमा काम गरिराखेका छन,
र मलाई यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हेर्न मन छ।
के यसले साँच्चै एउटा एक्लो पूर्वजसम्म पुर्याउँछ
जुन २०--२५००० वर्ष अघिको होस?
अनि यदि हामी त्यो एक्लो पूर्वजभन्दा अगाडि गयौँ भने,
जतिबेला सायद धेरै भाषाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा थियो?
त्यो कतिसम्म पुरानो होला त? आधुनिक भाषा कतिसम्म पुराना होलान त?
यो कति दशौँ हजार वर्ष अगाडि पुग्छ त?
क्रिस एन्डर्सन: के तपाईँलाई यसको उत्तर के हो त भन्ने कुराको अन्दाज वा आशा छ त?
मुरे गेल-म्यान: हजुर, मेरो अनुमानमा आधुनिक भाषा गुफाका चित्रकला र
गुफाका अभिलेख र गुफाका मुर्तिहरूभन्दा पुरानो हुनुपर्छ
अनि पश्चिमी युरोपका गुफाभित्र लगभग ३५ हजार वर्ष वा अझ अघि
पाषाण युगमा माटोमा कुँदिएका नृत्य कदमहरूभन्दा।
ऊनीहरूले यी सब चिजहरू गरे अनि ऊनीहरूसँग आधुनिक भाषा पनि थिएन भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन
त्यसैले मेरो अनुमानमा वास्तविक उत्पत्ति कम्तिमा त्यति अघिसम्म पुग्छ र अझ अघि हुन पनि सक्छ।
तर त्यसको अर्थ त्यतिमात्रै होईन कि सबै अथवा धरैजसो, अझ प्राय:जसो
आजका प्रामाणिक भाषाहरू सायद त्योभन्दा नयाँ भाषाबाट
उत्पत्ति भएका त हैनन, जस्तो मानौँ २० हजार वर्ष वा यस्तै।
यसलाई नै हामी सङ्कुचन भन्छौँ।
क्रिस: अँ, फिलिप एन्डर्सन ठिक पनि हुनसक्छन।
तपाईँलाई हरेक चिजको बारेमा अरू कसैलाई भन्दा बढी थाहा छ होला।
यो एउटा सम्मानयोग्य कुरा हो। धन्यवाद मुरे गेल-म्यान।
मुरे गेल-म्यान-- भाषाको पूर्वजको बारेमा | TED Talk | TED.com